Nhau - Ko yako mota system yakangwara? Zviri smart chaizvo kana uine basa rakadai, zvinoenderana nekuti unosangana nechiyero
Yako mota system yakangwara? Zviri smart chaizvo kana uine basa rakadai, zvinoenderana nekuti unosangana nechiyero
Nekuvandudzwa kwehunhu hwehupenyu hwevanhu, izvo zvinodiwa nemotokari zviri kuramba zvichikwira uye zvichikwira. Kugadziriswa kwese mumotokari kunofanirwa kuzadzisa zvido zvavo. Chekutanga chinopihwa kune ipi mhando yemamodeli, senge saizi yemahwindo uye kushandiswa kwenzvimbo yekuchengetera. Kune zvakare nzvimbo yakasununguka, chakanyanya kukosha chinhu chakangwara kudzora hukuru sikirini uye kumwe kumisikidza kwakasiyana siyana, imwe inokosha. Kunyanya nekusimudzirwa kwetekinoroji, mota-muchina system yatove yechipiri nharembozha inowanzoshandiswa nevanhu. Inofanira kubatidzwa uchangopinda mumotokari.
Kugadzirwa kwemota-muchina system
Kudzokera kumashure, yekutanga mota-muchina system yakagadzirwa muna 1910 anopfuura makore zana apfuura. Zvakatora makore anopfuura makumi maviri kuti vaone zvakajairika mashandiro emazuva ano akadai sekufona, Bluetooth, tepi, DVD, uye kufamba. Kunyangwe kuvandudzwa kweruzivo rwehungwaru kuri kukurumidza uye nekukurumidza, tisingataure, kuvandudzwa kwemotokari-muchina masisitimu anononoka.
Semuenzaniso, Apple yakagadzira uye ikatengesa yekutanga yekubata-skrini Apple nhare mbozha muna 2007, asi zvakazosvika gore ra2012 apo mota-muchina system yakaziva kubata kwekubata. Kusvika parizvino, mamwe masisitimu emota-mota anofanirwa kuvimba nekushanda kwemabhatani epanyama. , Funga nezvazvo zvakanyanya, isu tanga tiri kure nenguva yemabhatani mafoni, zvinoita sekunge nguva yapfuura, asi mota dzanhasi dzichiri kusaparadzaniswa nemabhatani mashandiro.
MOTO ANDROID NEMAVI SYSTEM YEMAUDI A4, Q5 DZAKATEVEDZANA VATAMBUDZI VEMULTIMEDIA NEMAHARA
n-mota Audio Varaidzo Sisitimu ine Bluetooth uye USB Kubatana
Iine iyo DMH-G220BT mu-mota odhiyo Varaidzo sisitimu inonakidzwa neyako ese aunofarira zvemukati pane hombe 6.2 ”Yakajeka Type Resistive Multi-yekubata-skrini. Iye Piyona DMH-G220BT inokutendera iwe rusununguko rwekutora mimhanzi yako uye kuunganidzwa kwevhidhiyo newe munzira. Kunyangwe ichengetwe pane USB chengetedzo kana pane yako yazvino smartphone, iyo DMH-G220BT inotamba maodhiyo / mavhidhiyo mafaira kubva pamhando dzakasiyana dzakasiyana kusanganisira MP3, DivX, MPEG4 uye WMA.
Pamusoro pezvo, izvi zvine mutsindo mumotokari AV Varaidzo sisitimu yakavakira-muBluetooth yekubatana. Inokutendera iwe kutenderera mimhanzi yako kana kufonera isina-ruoko pamusoro pechisungo chisina waya. Iye Piyona DMH-G220BT zvakare inoratidzira yekuisa kamera, kuti iwe ugone kunamatira kumashure veiw kamera kubatsira kudzosera mafambiro zviri nyore
Kero:No.422-424, Kuvaka F, Chuangyigongshe, wenfeng mugwagwa, shajing guta, Baoan dunhu, Shenzhen. China